MPITARIKA NY TUBE SQUARE ao CHINA
MPITARIKA indostrialy TUBE TANANA CHINA
FAMPANDROSOANA TSARA TSARA
TUBE STEEL SQUARE & RECTANGULAR
PIPE WELDED ERW
PIPE TSY MISY SAINA
PIPE STEEL MANOKANA
TUBE / COIL ny STAINLESS STEEL
VAOVAO SY FAQ
fanaraha-maso ny fizotrany
Hentitra ny rohy
Valiny haingana afaka 30 minitra
iza ireo YuanTaiDeRun
MANORANA TENY VOA-JAVATRA TENY GLOBAL
Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd., natsangana tamin'ny volana martsa 2002 ary avy amin'ny Tianjin Yuantai Industrial and Trading Co., Ltd, dia miorina ao amin'ny toby famokarana fantsona lehibe indrindra — faritra indostrialy Daqiuzhuang any Jinghai Tianjin izay akaiky ny lalam-pirenena China 104 sy 205 ary 40 km fotsiny ny halaviran'ny Seranan-tsambo Tianjin Xingang. Ny toerana ara-jeografika tsara dia manohana ny fanamorana ny fitaterana an-tanety sy any ivelany.
YuanTaiDeRun dia natsangana tamin'ny 2002
Mpanamboatra 500 voalohany any Shina
5 tapitrisa taonina
Maherin'ny 5 tapitrisa taonina ny fahaizany mamokatra
Ny vondronay dia mamokatra karazana fantsona vy isan-karazany, fampiharana marobe, fiantohana kalitao, kalitao aloha
Mpamatsy fantsom-by vy 2 inch id
Fitaovana fantsom-bozaka karbôna mainty
ASTM A36 fantsom-boaloboka vy mahery mihodina
Black MS-Square-Pipe-Thickness – 3-6mm
MS-Square-Pipe-hatevina – 3-6mm
ERW Hollow Section avy any Shina
YuantaiDerun Fizahana banga struktural
Sodina Hollow Round MS
20 taona niainana fanamboarana fantsom-by
Iray amin'ireo mpandrafitra ny fenitra nasionaly
Ny orinasam-pamokarana fantsom-pandrosoana lehibe indrindra sy toradroa
Ho fanampin'ny foibe any Tianjin, misy sampana sy sampana maro any Tangshan sy toerana hafa.
YUANTAIDERUN TANGSHAN FACTORY
INDUSTRY YUANTAI SY VAROTRA
FANORAN-DALANA FAMPIANARANA GROUP YUANTAI DERUN GROUP
Tetezana Hong Kong-Zhuhai-Macao
Hong Kong Zhuhai Macao Bridge dia tetezana iray sy tonelina mampitohy an'i Hong Kong, Zhuhai ary Macao any Shina. Any amin'ny faritry ny ranomasina Lingdingyang, eo amoron'ny Reniranon'i Pearl River, any amin'ny faritanin'i Guangdong, no misy azy. Izy io dia ny faritra atsimo amin'ny arabe misy ny peratra any amin'ny faritry ny Renirano Voahangy.
Ny Kianja Nasionaly (Akany Vorona) dia eo atsimon'ny afovoan-tany eo amin'ny Paka Olaimpika Beijing. Io no kianja lehibe amin'ny Lalao Olaimpika Beijing 2008. Mirefy 20,4 hektara ny velarany ary mahazaka mpijery 91000. Taorian'ny Lalao Olaimpika dia nanjary fanatanjahan-tena manan-tantara sy lova nolovaina Olaimpika tany Beijing izy io.
Ny National swimming Center, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "Water Cube" sy "ice cubus", dia miorina ao amin'ny Beijing Olympic Park. Io no natatorium lehibe namboarin'i Beijing ho an'ny Lalao Olaimpika fahavaratra 2008 ary iray amin'ireo trano manamarika ny Lalao Olaimpika Beijing 2008
Seranam-piaramanidina sivily 4f ny seranam-piaramanidina Hong Kong, any Chek Lap Kok, Nosy Lantau, Hong Kong, Sina, 34 kilometatra miala ny tanàn-dehibe. Iray amin'ireo seranam-piaramanidina be olona indrindra eran'izao tontolo izao. Seranam-piaramanidina maherin'ny 100 no miasa eto, laharana faha-dimy amin'ny volan'ny mpandeha ary voalohany amin'ny volan'ny mpitatitra entana mandritra ny 18 taona misesy
Ny National Grand Theatre of China dia iray amin'ireo "fahitana enina ambin'ny folo an'i Beijing". Any amin'ny andrefan'ny Kianja Tiananmen no misy azy ary eo andrefan'ny Lapan'ny Great ny olona eo afovoan'i Beijing. Izy io dia misy ny tranobe lehibe, ny lalantsara anaty rano, ny toeram-pijanonana ambanin'ny tany, ny farihy artifisialy ary ny toerana maitso amin'ny lafiny avaratra sy atsimo.
Niorina tamin'ny tany mirefy 11 tapitrisa metatra toradroa amin'ny tany avo lenta, ny villa Dubai dia manana ala sy zaridaina, sisin-dalana miolakolaka ary faritra be olona. Fifohazana iray ao afovoan-tanàna, ny sakana amin'ny havoanan'i Dubai dia namboarina tamim-pahamendrehana hanodidina ny kianja filalaovam-pirenena 18 lavaka
Kuwait International Airport dia seranam-piaramanidina iray any Farwaniya, Koety, 15.5 km (9.6 miles) atsimon'ny Kuwait City, mahatratra 37.7 kilometatra toradroa (14,6 kilaometatra toradroa). Io no ivon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Al Jazeera sy Koety.
Ny tilikambon'i CITIC any Beijing, fantatra ihany koa amin'ny hoe Zhongguo Zun, no trano misy ny foiben'ny China CITIC Group. Any amin'ny block z15 no misy azy, ny faritry ny distrikan'ny asa afovoany. Miaraka amin'ny haavo 528 metatra, gorodona 108 ambonin'ny tany ary gorodona 7 ambanin'ny tany, dia mahazaka olona 12000 hiasa, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana 437000 metatra toradroa. Ny fisehoan'ny maritrano dia namboarina ho fanahafana ilay sambo fanao mahazatra "Zun". Ao anatiny, misy ny vangin-jumplift voalohany manerantany miaraka amin'ny haavony mihoatra ny 500 metatra, izay isaina ho "tranobe folo farany an'i Shina ankehitriny".
FANORENANA GOOGLE SINGAPORE
Ity no foibe angon-drakitra fahatelo an'ny teknolojia any Singapore ary hipetraka ao Jurong West amoron-dàlana amin'ireo tranony roa hafa.
Dubai Hills Estate dia iray amin'ireo fivoarana vaovao mahavariana an'i Dubai. Eo anelanelan'ny làlambe lehibe roa amin'ny Al Khail Road sy Mohammed Bin Zayed Road, Dubai Hills Estate dia trano fonenana sy fomba fiainana an-dàlam-pandrosoana misy villa, trano ambany sy trano fonenana. Ity no dingana voalohany amin'ny tetik'asa be Mohammed Bin Rashid City, izay nahazo an-tsokosoko ilay monikeran'ny 'tanàna ao anaty tanàna iray' noho ny haben'ny fampandrosoana.
Ny renivohitra fitantanana vaovao any Egypt dia miorina 45km atsinanan'ny Kairo amin'ny lalana mankany amin'ny seranan-tsambon'i Suez. Ny tetikasa dia heverina fa hanolotra asa an'arivony ary handrisika ny toekarena. Rehefa feno ny renivohitra vaovao dia antenaina handraisana olona 5 tapitrisa hamaha ny olan'ny fitohanana mitohy ao Kairo renivohitra ankehitriny. Ity ambany ity ny fandaharam-potoanan'ny tetikasam-pitantanana renivohitra vaovao sy izay rehetra tokony ho fantatrao momba ilay tetikasa hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao.
TRANO MAITSO EJIPTA
Ny tetik'asa mega an'ny trano fandraisam-bahiny izay napetraky ny governemanta egyptiana dia mitaky dingana lehibe amin'ny tantaran'ny fambolena ao amin'ny firenena satria izy io dia handray anjara lehibe amin'ny fahazoana antoka ara-tsakafo ho an'ny firenena arabo be mponina indrindra, hoy ny manam-pahaizana ejiptiana.
VAOVAO bebe kokoa
Miaraka amin'ny ivon-teknolojia, fikarohana ary fampandrosoana mafy
Guarantee kalitao 90 andro aorian'ny fahatongavan'ny entana
20 taona niainana tamin'ny famokarana fantsom-by lehibe
Izahay dia hanome anao teny maimaimpoana maimaimpoana ary handahatra ny asanao amin'ny andro sy ny fotoana mety indrindra aminao.
Misorata anarana amin'ny buletinay mba haharaka hatrany ny doka, ny fihenam-bidy, ny varotra ary ny tolotra manokana.
Iza moa izahay? News Contact FAQ Project Privacy Notice